Router Login, Reset, Pasiwedhi, IP Address Details
Zvita 7, 2018 http192168111com
Zvinokosha kupa Username zvechokwadi uye pasiwedhi. saka, asati kutamira kune Login zvichiitwa, ndapota nechokwadi chokuti une Username zvechokwadi uye pasiwedhi kuvhura router arun Panel.
Zvinokosha kupa Username zvechokwadi uye pasiwedhi. saka, asati kutamira kune Login zvichiitwa, ndapota nechokwadi chokuti une Username zvechokwadi uye pasiwedhi. Kana musingadi kurangarira yenyu Username uye pasiwedhi mashoko, kutevedzera mirayiridzo pazasi.
Kana iwe akashandura password uye nganwa uchawana kuti itangezve kuti router kana Modem kuti fekitari pazviruva. Pane zvakavanzika Reset bhatani pamusoro ose Wireless router kana ADSL Modem. Kuti adzorere router shure kuti fekitari pazviruva, unofanira kuomerera pane bhatani nokuda 10 masekondi kushandisa tsono kana munongoro.
Kana usingazive Username yako pasiwedhi uye akanga achinja Username uye pasiwedhi kusvikira ikozvino, Saka edza kuwana navo ataurwa pazasi inotora pamwe router wacho Serial nhamba uye Login kero.
Isu tinoshandisa makuki pane webhusaiti yedu kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Gamuchira", unobvuma kushandiswa kweZVESE makuki.
Inogoneswa Nguva Dzose
Makuki anodikanwa akakosha zvakanyanya kuti webhusaiti iite nemazvo. Ichi chikamu chinongosanganisira makuki anovimbisa zvekutanga mashandiro uye ekuchengetedza maficha ewebhusaiti. Aya makuki haachengete chero ruzivo rwemunhu.
Chero makuki anogona kunge asinganyanye kudikanwa kuti webhusaiti iite uye anoshandiswa zvakanyanya kuunganidza mushandisi wega data kuburikidza ne analytics, ads, zvimwe zvirimo zvakaburitswa zvinonzi semakuki asingadiwe. Izvo zvinosungirwa kuwana mvumo yemushandisi usati waita makuki aya pawebhusaiti yako.